Global Voices teny Malagasy » Arzantina: Fanavaozana ny reniranon’i Riachuelo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2018 4:05 GMT 1	 · Mpanoratra Celeste Calvet Nandika (fr) i Lester Bolicenni, Liva Andriamanantena
(Marihina fa tamin'ny 18 Aprily 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manasaraka ny renivohitr'i Arzantina Buenos Aires amin'ny faritany misy azy ny renirano Matanza, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe El Riachuelo  (ilay renirano kely). Mamakivaky ny faritr'i Boca i El Riachuelo, izay be mpizahatany mitsidika satria ao no misy an'i Caminito, toerana manan-danja amin'ny tantaran'ny Tango. Mampiseho fampisehoana dihy sy mozika an-dalambe matetika ny lalan'i Caminito . Rehefa mitsidika an'i Buenos Aires ianao, dia mety hieritreritra ny fandehanana mihaino ny fampisehoana mampihetsi-po ataon'ny zavamaneno Tango amin'ny alin'ny lohataona ary ho farananao amin'ny fitsangatsanganam-pitiavana eny amoron'ny renirano ny hariva. Indrisy anefa fa mety ho tsy hevitra tsara izany noho ny zavamisy marina. Iray amin'ireo faritra maloto indrindra ao amin'ny firenena ity renirano ity, noho ny fako avy amin'ny orinasa maro manamorona azy, indrindra fa ny fakon'ny hoditra.
Sarin'i FJTU, nampiasàna lisansa Creative Commons
Mbola misy anefa ny fanantenana. Nandray ny Artic Sunrise, sambo mpamaky lagilasin'ny Greenpeace izay hanohana ny hetsika amin'ny fanadiovana  ny renirano, ny seranan-tsambon'i Buenos Aires. Avy any Brezila ity sambo ity, faritra izay nanaovany ny hetsika nitovy tamin'izany tany amin'ny reniranon'i Amazona.
Naneho karazana fanerena sy fampahatsiahivana ho an'ny besinimaro ny fahatongavan'ny Artic Sunrise fa tsy mbola nisy ny hetsika natao  sivy volana taorian'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Nasionaly hanadiovana ny renirano. Na dia teo aza ny tsy firaharahian'ny manampahefana sy ny fiandrasana ny valiny dia naneho ny fanantenany  tao amin'ny bilaoginy La communication no es ingenua i Francisco Isla Montoya, bilaogera ao Arzantina :
Manomboka mahita ny vokatry ny ezaka natao isika ankehitriny. Misy ny taranaka vaovao, ny fivoaran'ny fiarahamonina, ary ny lalàna miaro ny planeta, na farafaharatsiny izy ireo mba niezaka. Tsy kisendrasendra ny fahatongavan'ny mpamaky lagilasin'ny Greenpeace ao Buenos Aires. Izy no feon'ireo mpiaro ny tontolo iainana, ireo mpandala ny tontolo iainana sy ireo olom-pirenena izay mahatsapa fa tokony hokarakaraina ny toeram-ponenany .
Sarin'i Albริ nampiasana lisansa Creative Commons
Nizara tao amin'ny bilaoginy Listao ny lahatsary iray momba ny fanentanana nataon'ny FTMF=ONG  ho an'ny Riachuelo i Hernán Nadal, mpandrindra ny teknolojia vaovao ao amin'ny Greenpeace.
Herinandro talohan'ny nahatongavan'ny Artic Sunrise dia nametraka nomeraon-telefonina ny Greenpeace mba ahafahan'ny vahoaka mampahafantatra azy ireo momba ny fako arian'ny orinasa ao amin'ity faritra ity. Araka ny fanamarihana iray tao amin'ny bilaogy Protagonistas, hampiasaina hamoronana sarintany momba ny fahasimban'ny renirano  ny angon-drakitra ary ahafahana mandinika tsara kokoa ny isan'ny indostria tompon'andraikitra amin'ny fandotoana.
Na teo aza ny tsy fahombiazan'ny manampahefana dia mety hanampy amin'ny famerenana indray ny renirano amin'ny zavatra izay efa nantenaina efa hatry ny ela ireo mpiaro ny tontolo iainana sy ireo olom-pirenena nahatsapa ny zava-misy: mba ho toeram-pihaonana ho an'ny fianakaviana, izay hankafizin'ireo mpizaha tany, ary ahafahan'ny fiainana hivelatra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/16/124546/
 El Riachuelo: http://en.wikipedia.org/wiki/El_Riachuelo
 sambo mpamaky lagilasin'ny Greenpeace izay hanohana ny hetsika amin'ny fanadiovana: http://www.clarin.com/diario/2009/04/14/um/m-01897715.htm
 tsy mbola nisy ny hetsika natao: http://www.greenpeace.org/argentina/contaminaci-n/a-nueve-meses-del-fallo-de-la
 naneho ny fanantenany: http://blogs.clarin.com/francisco-isla/2009/4/15/greenpeace-retorna-
 lahatsary iray momba ny fanentanana nataon'ny FTMF=ONG: http://www.listao.com.ar/2009/04/greenpeace-vuelve-al-riachuelo.html
 hampiasaina hamoronana sarintany momba ny fahasimban'ny renirano: http://wwwprotagonistascomar.blogspot.com/2009/04/greenpeace-recibira-denuncias-sobre-la.html